Ku Tag Weyn Istaraatiijiyad Iimayl ah oo Kicinaysa si aad u Wado Sky-High ROI | Martech Zone
E-mayllada la kiciyey ayaa ah hab fiican oo macaamiisha loola macaamilo oo loo kaxeeyo iibinta, laakiin fikradaha khaldan ee ku saabsan waxa ka dhalan kara kicinta iyo sida loo hirgaliyo ayaa ka ilaaliya qaar ka mid ah suuqleyda inay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​xeeladda.
Waa maxay Email kiciyay?
Heerkeeda aasaasiga ah, kicintu waa jawaab otomaatig ah, sida salaanta dhalashada ee otomaatigga ah ee ka timid Google. Tani waxay u horseedaa qaar ka mid ah inay aaminaan in emayllada kiciyay loo isticmaali karo oo keliya xaaladaha xaddidan. Laakiin dhab ahaan, liiska dhacdooyinka kicinaya, xogta iyo ficillada ayaa ah mid aan xad lahayn.
Halkii ay ku dhici lahaayeen dabinka fekerka yar markay tahay waxyaabaha kiciya, suuqleyda waa inay taa bedelkeeda ka fikiraan waxyaabaha kiciya inay macquul tahay sabab kasta oo dib loogu noqdo oo loo haysto macmiil. Shirkadaha hadda adeegsada emayllada kiciyay, isdhexgalka gawaarida dukaamaysiga ayaa ah kicinta guud. Dukaameeyaha ayaa alaabooyin dhowr ah ku ridi kara gaadhigeeda ka dibna ka tagaya goobta. Shirkaddu waxay u isticmaashaa xogtaas kicin, iyada oo u direysa macmiilka xusuusin email ah oo ku saabsan waxyaabaha ku jira gawaarida si loo kordhiyo khibradda wax iibsiga iyo ugu dambeyntii u kaxaynta beddelka
Kiciyeyaasha laxiriira Gawaarida dukaanka oo laga tago waa hab la caddeeyey oo lagu dhaqaajiyo dakhliga adoo dib u helaya dareenka macaamiisha. Laakiin iyadoo diirada la saarayo maanta ololaha Analytics iyo xogta macaamiisha oo ah walxaha muhiimka ah ee keena isbeddelka, way u fududaan kartaa suuqleyda inay lumiyaan aragtida ilaha kale ee qiimaha leh ee ururka dhexdiisa ah, sida buugaagta alaabada iyo isbeddelada qiimaha.
Markay suuqyayaashu u qeexaan kiciyayaal si guud ahaan fursad ay kula macaamil la yeeshaan macaamiisha iyadoo lagu saleynayo dabeecadaha macaamiisha iyo isbeddelada ku qoran buuga alaabta, waxay bilaabi karaan inay tixgeliyaan xogta shirkadda sida isbeddelada sicirka iyo dhibcaha macaamiisha lagala soo baxo ee ka dhasha ogeysiisyada alaabada oo ah fursad lagu dhiso olole kicineed. Tallaabada xigta waa dejinta kiciyeyaasha iyo tijaabinta dhibcaha taabashada ay keeneen heerarka ugu fiican ee furan, guji iyo beddelaad.
Tusaale ahaan, shirkaduhu waxay ka faa'iideysan karaan xogta macaamiisha si ay u dhisaan ololeyaal kiciya hareeraha noocyo kala duwan oo laga tago, oo ay ku jiraan raadinta, qaybta iyo bogga wax soo saarka. Ka tagid kasta waxay fursad u tahay in laga barto dabeecaddaas oo ay kiciso emayl aad u sarreeya, oo khuseeya oo muujinaya alaabada iyo dalabyada la xiriira dukaameeyahaas. Istaraatiijiyad kale oo wax ku ool ah ayaa ah in la kiciyo emayl ku saabsan alaabooyin gaar ah, sida hoos u dhaca qiimaha ama alaabada yar.
Suuqyayaashu waxay sidoo kale ku tijaabin karaan dalabyo gaar ah si ay u arkaan waxa riixa ROI-ga ugu sarreeya. Tusaale ahaan, olole kicin ah oo xasuusinaya macaamilka ku saabsan alaabooyinka gawaarida wax lagu iibiyo ee la dayacay ayaa macaaneyn kara heshiiska adoo siinaya maraakiib bilaash ah. Suuqleyda ayaa tijaabin kara xaalado kala duwan si loo ogaado habka ugu habboon ee la jaan qaadaya ujeedooyinka suuqgeynta iyo dakhliga.
Waagii hore, aqoonsashada dhibcaha taabashada iyo ka shaqeynta ololeyaasha kicinta ayaa waqti badan qaatay oo qaali ahaa. Laakiin iyada oo la adeegsanayo xalka sare ee e-commerce ee kicinta hadda la heli karo, suuqleyda ayaa bilaabi kara maalmo, maahan bilo waxayna u diri karaan kiciyaasha waqtiga dhabta ah. Intii ay socdeen ololeyaal emayl kiciya ayaa suuqyayaashu awood u yeelan karaan, waana inay, A / B tijaabiyaan khadadka mawduuca iyo naqshadeynta si loo hubiyo in dalabyada saxda ah loogu diro waqtiga saxda ah macaamiisha saxda ah.
Suuqleyda adeegsada baaritaanka A / B si ay u helaan dalab sax ah waxay kasban karaan abaalmarinno aad u qiimo badan. Hal tusaale, nooc la helay oo bixiya iibka ugu fiican ahaayeen 300% waxtar badan ka badan dalabyada ka hadlaya “soogalootiga cusub” Xogta sidan oo kale waxay ka caawineysaa suuqleyda inay sare u qaadaan soo celinta ololaha, sidoo kale isticmaalka farsamooyinka sida ku darista magaca sheyga cinwaanka maaddada emaylka, taas oo ka dhigaysa 10 jeer waxtar.
Suuqleyda maanta waxay haystaan ​​ikhtiyaarro badan oo dheeraad ah iyada oo ay ugu wacan tahay xog weyn iyo xalalka kicinta ecommerce sare Kuwa doonaya inay ku guuleystaan ​​tartan waa inay si weyn uga fikiraan ololeyaasha kicinta halkii ay si fudud ugu dhex tuuri lahaayeen istiraatiijiyadda guud ee shirkadda. Habka ku saleysan ka faa'iideysiga macaamiisha iyo macluumaadka kaydka alaabada si loo kaxeeyo isgaarsiinta khuseysa iyo waqtiga kiciyay, suuqleyda ayaa bilaabi kara wadista kororka weyn.
Tags: ecommerce ayaa kicisayecommerce ayaa kicisay emayltiggeremail.ioemayllada kiciyay